Ungawuthintela njani umqala obuhlungu | IBezzia
Amaqhinga okuthintela umqala obuhlungu
Susana Garcia | | Iingcebiso zezempilo, ZeMpilo
Ngokufika kwengqele kuninzi abantu abaya kuva ubunzima yingxaki yomqala, nokuba ayinanto yakwenza nentsholongwane. Umqala obuhlungu unokuvela nje ngenxa yokuba sesichengeni sokubanda kwaye le ndawo ihluphekile, nangona ngamanye amaxesha isisandulela sokubanda okanye usulelo. Ke yindawo ekufuneka uyinyamekele.
Kukho ezinye Amaqhinga esinokuwalandela ukuthintela umqala obuhlungu, ingxaki echaphazela abantu abaninzi ebusika naxa kufika ingqele. Oku kungonwabi kunokuba yinto ecaphukisayo, ke kubalulekile ukuyiphepha kwaye unakekele le ndawo intle.
1 Ukucoca amanzi emqaleni
2 Yiba nobusi
3 Ugquma umqala
4 Gwema imeko yomoya kunye notshintsho lobushushu
5 Musa ukutshaya okanye usele utywala
6 Isondlo esifanelekileyo
Ukucoca amanzi emqaleni
Xa sinentlungu Umqala sihlala siwubona ukuba womile kwaye udumbile. Oko kuvakala komqala womqala kuhlala kuyacaphukisa, ngakumbi ebusuku, ke kubalulekile ukuba unciphise. Ukufakwa kwamanzi kuya kubalulekile kule ngqondo, kuba ukufakwa emqaleni kuya kusinceda singabinalo uvakalelo kwaye umqala uphumle ngakumbi. Sela zonke izinto ezingamanzi kodwa uphephe ubisi, kuba ludala i-mucus engakumbi, kunye notywala obunciphisa amanzi kunye nokunciphisa ukuzikhusela.
La Ubusi buluncedo olukhulu xa sinomqala obuhlungu ngezizathu ezininzi. Isinceda ukuba sithambisa kwaye sigcine umqala ube mnandi ngakumbi, okusinika isiqabu esikhulu. Kodwa ikwanazo nezinto zokubulala iintsholongwane ezisinceda sisuse iintsholongwane ezinokuthi zichaphazele umqala. Thatha ubusi kunye namanzi afudumeleyo emon kwaye uya kuba nonyango olukhulu emqaleni wakho. Unokuthatha icephe ekuseni kunye nenye ngaphambi kokulala ukunceda umqala wakho uphole.
Ukugquma umqala yindlela elungileyo yokuthintela. Umqala unovakalelo kubanda kwaye ukuba iindlela zethu zokhuselo ziyehliswa lutshintsho lobushushu, luya kusichaphazela ngakumbi. Kungenxa yoko le nto ukuba siphuma sisiya engqeleni kufuneka siyenze ikhuseleke kakuhle. Ijezi ezinentamo ephezulu zizidibanisi ezinkulu, kodwa kunye nezikhafu nayo yonke into esinceda ukuba sigcine iintamo zethu zikhuselekile kubanda. Soloko uphatha isikhafu, nokuba sikhaphukhaphu, ukuthintela umqala ekuchaphazelweni ziidrafti okanye kubanda ngaphandle.
Gwema imeko yomoya kunye notshintsho lobushushu
Los Ukutshintsha kweqondo lobushushu kunokuba yingxaki enkulu xa sithetha ngomqala obuhlungu, kuba ukhuseleko lwethu luyehla lula. Kubalulekile ukuthintela imithombo yengqele enje ngemoya yomoya okanye ukuphuma ngaphandle ngaphandle kokuzikhusela ngokufanelekileyo. Oku kunokwenza umqala obuhlungu ube mbi kakhulu kuba iya kudumba ngakumbi. Kwelinye icala, akufuneki sibufudumeze phezulu kakhulu, kuba ukutshintsha kwamaqondo obushushu kunokusichaphazela nathi.
Musa ukutshaya okanye usele utywala
Ezi imikhwa emibini ihlala ineziphumo ezibi Kwaye enye yazo kukuba unokuchaphazela umqala wakho ngakumbi. Ukutshaya kunokwenza umqala wakho uhlupheke ngakumbi ebusika kwaye uphilise ngokulula. Kwelinye icala, utywala busenza singabikho emzimbeni kwaye buthobele iindlela zethu zokuzikhusela, into ekufuneka ithintelwe ngazo zonke iindlela ebusika. Imikhwa esempilweni ihlala ibalulekile ukuthintela zonke iintlobo zezifo.
Ukutya okuhle ngesiqhelo ube sisitshixo kubomi obunempilo. Ukutya kusinceda ukuba someleze ukhuseleko lwethu, njengeevithamini ezikhoyo kwiziqhamo. Sitya novithamini C, onceda amajoni omzimba. Ngokutya siphinda siphucule inwebu yangaphakathi enevithamini A kwaye sigcina umzimba uhlaziyekile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » ZeMpilo » Iingcebiso zezempilo » Amaqhinga okuthintela umqala obuhlungu
Uhlala njani neqabane elinengxaki yokudakumba
Inkulumbuso kaNovemba kumaqonga